ज्ञानेन्द्र विरुद्ध रेखाले भनिन्, 'के पाराको बिरोध हो ? चर्चा बटुल्न लफडा काफि हुदैन' |
ज्ञानेन्द्र विरुद्ध रेखाले भनिन्, ‘के पाराको बिरोध हो ? चर्चा बटुल्न लफडा काफि हुदैन’
२९ भाद्र २०७६, आईतवार १४:०१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालगन्ज बिमानस्थलमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई माथि ज्ञानेन्द्र शाहीले गरेको ब्यवहार प्रति विरोध गरेकी छन् ।
नायीका रेखा थापाले शनिवार मन्त्रीमाथी भएको ब्यवहार प्रति संकेत गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको बिरोध गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा स्टाटस लेख्दै नायीका थापाले विरोधको शैली ठिक नभएको उल्लेख गरेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा स्टाटस लेख्दै थापाले शाहीको नाम उल्लेख नगरेरै ब्यग्य गरेकी छन् । उनले शाहीले चर्चा बटुल्न त्यस्तो कृयाकलाप गरेको टिप्पणी गरेकी छन् ।
उनले फेसवुकमा स्टाटस लेखेकी छन् यो के पाराको बिरोध हो ? बुझिएन । कि क्रान्ति गरे हुने कि बिधी भित्र सभ्य व्यबहार देखाये हुन्थ्यो । चर्चा पाउन, ध्यान तान्न, नेता बन्न त्यत्ती लफाडा काफी हुँदैन । कुरा देश चलाऊने गरिरहदा विश्वशनियताका थुप्रै सिद्दान्त र आचरण पनि हुनु पर्छ होला । अराजकता ठुलो नियतको भयो भने राजनीति हुन्छ, छुद्र भो भने आफ्नै औकात देखाउछ । उनले शाहीलाई छुद्र ब्यवहार प्रर्दशन गरेर औकात देखाएको टिप्पणी गरेकी छन् ।